Ciidamada Dowladda oo cadaadiska ku kordhiyay xaafad ku taala Dhuusamareeb | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Dowladda oo cadaadiska ku kordhiyay xaafad ku taala Dhuusamareeb
Ciidamada Dowladda oo cadaadiska ku kordhiyay xaafad ku taala Dhuusamareeb
Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda, ay kaga sii dareen xaaladda xaafadda Dayax ee Magaalada Dhuusamareeb, ka dib markii ay xoojiyeen culeyskii ay dadka ku dhaqan ku hayeen.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda ayaa toban maalmood ka hor ciidan xoogan ku soo daadiyay wadooyinka iyo xaafadaha Magaalada Dhuusamareeb, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay bannaanbaxyo magaalada ka dhigayan taageere-yaasha Ahlu Sunada Galmudug.
Xaafadda Dayax waxay markii hore ee xaafadaha kale ee magaalada kala mid ahayd culeyska ay soo saareen Ciidamada Dowladda, balse waxay maalmihii ugu dambeysay ay noqotay mid uu culeyskeedu ka xoogan yahay xaafadaha kale, oo waxaad waddo kasta oo xaafadda dhex marta ku arkaysaa Ciidamadii Dowladda, oo si raxan raxan ah loogu soo daadiyay.
Mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Dayax oo la hadlay Dhacdo.com ayaa yiri “Dhibka wuxuu ka jiro mataqaanaa, Masuuliyiinta Dowladda ayaa isku aamini waayay oo ka soo guuray xaafadda Waaberi, oo hadda u soo wareegay xaafadda Dayax, maxaa yeelay xaafadda Waaberi waxaa ku badan taageere-yaasha Ahlu Sunna.”
Ninkan oo magaciisa sababo amni aan u qarinay ayaa markale yiri “Luuq kasta oo ku yaala xaafadda Dayax Ciidamadii Dowladda ayaa qoryo la taagan, dadka soo gelaya xaafadda, qaarkood waala baaraa, qaarkoodna waxaaba dhacda in dib loo celiyo.”
Waxa kaloo uu yiri “Wayba ka sii dareen oo hadda Luuq kasta way xirteen, cid ka hadli kartana lama arko. Aniga hadda kula hadlayo haddii aan magaceyga Warbaahinta ka sheego, waala i soo qabanayaa, waana la i xirayaa. Meeshaan caburin ayaa ka socoto, nolosha saan ah way nagu cusub tahay, waxaan u baranay ma’aha.”
Isagoo ka hadlayay dhibka ugu weyn ee ay iminka qabaan wuxuu yiri “Dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa, hooyadii fool ku qabato xaafadda Dayax xilli habeena, way adag tahay in gaari loogu keeno gurigeeda amaba looga qaado. Way lugayn kartaa mooyee, gaari in looga qaado, ka yaabi maysid.”
Ugu dambeen waxaa uu yiri “Tan iyo markii Ciidamada Dowladda ay yimaadeen Magaaladan Dhuusamareeb, weliba bishan haba ugu darnaatee, wax xoriyad ah kuma haysano wadooyinka magaalada inaan ku dhex marno.”
Xildhibaanad Cibaado Yuusuf Maxamed (Cibaado Shiino) ayaa Sabtidii sheegtay in Ahlu Sunna ay ka jawaabi doonto culeyska, ay Dowladda Federaalka ku hayso shacabka ku dhaqan Magaalada Dhuusamareeb.
Xildhibaanad Cibaado Yuusuf Maxamed oo ka mid ah labaatanka xubnood ee Ahlu Sunna laga siiyay Baarlamaanka Labaad Galmudug ayaa waxa ka socdo Dhuusamareeb ku sheegtay caburin.
Dadka reer Dhuusamareeb ayaa Ciidamada Dowladda waxay ku dhaliilayan inay suggidii amniga ka barteen amaba ka garanayan oo keliya waddo la xiro, xilli ay jiraan qorshayaal loogu talagalay in ammaanka lagu xaqiijiyo, iyadoo aan bulshada wadooyinka laga hor istaageen.